MDC Statement on the escalating crisis - Zimbabwe Situation
0	January 5, 2019 6:39 AM
Source: MDC Statement on the escalating crisis – The Zimbabwean
There is a huge fiscal crisis, lack of confidence, lack of trust, a crippling liquidity crisis, total social sector collapse and the old challenges of macroeconomic stability hitting rock bottom.
In this statement the MDC wishes to address the following areas of urgent concern, President Nelson Chamisa will in the next few days address in detail the MDC Agenda of 2018 highlighting major steps Zimbabwe will have to take going forward.
It is the convergence of these three crises that have created a deadly cocktail that requires a major paradigm shift in the way the economy is run, the way of doing politics and the governance culture in Zimbabwe.
Inflation is unabated causing more suffering to the Zimbabwean people, bread prices are set to go up once again. Actual figures are suppressed with government choosing to stay in denial and presenting a macro-economic framework with distorted figures even by the standards of the generous ZIMSTATS.The budget deficit keeps ballooning, while there is no solution to the debt crisis while government keeps announcing new lines of credit most of which are funding non-capital ventures.
Zimbabwe strike not called off: doctors’ representative